Isbahaysiga Asmara oo weli isku khilaafsan qeybsiga iyo awoodda guddiga fulinta iyo ciidamada dowladda federaalka ah oo weli rasaas ku wada xarunta warbaahinta Shabelle ilaa ay ka billaabayaan amaanta dowladda. Ruunkinet 18/09/07
Wararka ka immaanya magaalada Asmara ee dalka Eriteriya ayaa sheegaya in khilaaf soo kala dhex galay madaxda sare ee Isbahaysiga looga soo horjeeddo joogitaanka Soomaaliya ee ciidamada Itoobiya iyo dowladda federaalka ah.
Warka ayaa intaasi ku daraya in khilaafkoodu ku saleysan yahay awood qeybsida guddiga fulinta ee isbahaysiga.
Guddiga fulinta oo tiradiisa lagu sheegay in uu noqonayo 10 xubnood ayaa la soo jeediyay in 4 ka mid ah la siiyo maxaakiimta 4 kala la siiyo qurbo joogta iyo ururadda bulshada ee ka soo qeyb galay kulankii ku dhamaaday Asmara ayadoo 2 kali ah loo qoondeeyay baarlamaanka xurta ah ayadoo ay aan lagu darin labada Shariif.
Baarlamaanka xurta ah ee uu guddoomiyaha un yahay Shariif Xasan ayaa si weyn u diiday qeybsigaasi ayagoo ku tilmaamay in laga eexday.
Sidoo kale, golaha maxaakiimta ayaa soo jeediyay in la siiyo 4ta jago ee ugu muhiimsan guddiga fulinta oo kala ah maaliyadda, arrimaha gudaha, gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda.
Dhanka kale, ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa weli rasaas ku wada xarunta idaacadda warbaahinta Shabelle maanta.
Ciidamadan oo horay rasaas ugu furay xaruntaasi ayaa xabsiga dhigay qaar ka tirsan shaqaalaha Shabelle kal hore.
Siyaasadda dowladda ayaa si weyn uga soo horjeedda saxaafadda xurta ah haddi aysan buunbuunineyn arrimaha dowladda.